Faran’ny herinandro: hiaka-tsehatra i Olombelo Ricky - ewa.mg
News - Faran’ny herinandro: hiaka-tsehatra i Olombelo Ricky
Efa manomboka miverina tsikelikely
ny seho an-tsehatra amin’izao… Mpanakanto manana ny maha izy azy eo
amin’ny tontolon’ny mozika malagasy; i Olombelo Ricky indray no
hitondra ny sanganasany, rahampitso asabotsy 31 jolay, manomboka
amin’ny 3 ora sy sasany hariva etsy amin’ny Karibotel Domaine
Manerinerina Ambohibao. Mpanakanto anisan’ny nanamarika ny
fahazazan’ny maro ary mbola ankafizin’ny rehetra ny sanganasan’i
Olombelo Ricky, na any anaty fety na eny ambony tamboho…
Hovazoina ao, araka izany, ireo hira anisan’ny nahafantarana azy,
raha tsy hilaza afa-tsy ny « Mena masoandro »,
« Ikalangita »… Ho vahiny manokana amin’ity
Radanz. « Ilaintsika izao ny maka rivotra kely sady
mifaly no mihaino mozika, ho sambatra sy ho tretrika ary ho
finaritra dia samy hahita izay mahasoa azy», hoy ny
tompon’andraikitra ao an-toerana. Hetsika faran’ny herinandro
ihany koa izy ity ka antenaina hahazo fahafinaretany sy hiala voly
tsara ireo mpankafy mozika.
L’article Faran’ny herinandro: hiaka-tsehatra i Olombelo Ricky a été récupéré chez Newsmada.
Amin’ izao vanin’ andro izao , noho ny roto roton’ ny andavanandro dia ny manjoy ny fandaharana mandeha amin’ ny ireny televizionina ireny no fialan – tsasatra ankafizin’ ny daholobe. Isan’ izany ny fandaharana ara kolontsaina sy fialamboly « No Stress », izay feno 05 taona tamin’ ity taona ity. « Maro ny dingana nolalovina ho fanatsarana hatrany ny kalitaon ‘ ny vokatra atolotra ny mpijery. Nanomboka ny Alakamisy lasa teo dia ao amin’ ny « Rta » ny fandaharana « No Stress », no mandeha isaky ny herinandro, ny Alakamisy amin’ ny 8:15 alina ary ny Sabotsy amin’ ny 1:30 atoandro ny famerenana. Ary ny « No Stress Vazo », dia mandeha isan’ andro ny Alatsinainy hatramin ny Alahady amin’ ny 6:25 maraina » hoy I Fanja Rajaonarivony ny tompon’ andraikitra ny fandaharana. Araka ny fantantra moa dia zana – pandaharana samihafa no hita ao anatin’ ny fandaharana « No Stress » toy ny fanadihadian, ny interview handraisana vahiny mpian tsehatra eo amin ‘ ny resaka fialamboly sy kolontsaina, … « Maro zava – baovao mahafinaritra ahy mandeha ao amin’ ireto fandaharana roa ireto. Mirary fahombiazana hatrany ho an’ ny fandaharana « No Stress sy No Stress Vazo » » hoy i Onja. Ho an’ ny serasera dia misy ny pejy fb : « No Stress TV MADA . « Isany ny tena ankafiziko ireo fandaharana roa ireo, satria manome vahana kokoa ny mpanakanto sy ny fivelaran’ ny mozika. Ahatratra ny ela indrindra re fa toy ny rano sy vary ny mozika sy ny fandaharana « No Stress », tsy afa – misaraka » hoy i Farakely. «« No Stress…Fiara – miasa nahitam – pahombiazana hatrany, sehatra fifampizarana ho an’ ny mpanakanto sy ny mpankafia azy… Fankaherezana ho an ‘ ny 5 taona manaraka » hoy i Samoela. VIDEO: Cet article Feno 5 taona ny FANDAHARANA NO STRESS : Ao amin’ny RTA no fotoana… est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article Feno 5 taona ny FANDAHARANA NO STRESS : Ao amin’ny RTA no fotoana… a été récupéré chez Délire Madagascar.
Agence Française de développement: nanolotra fitaovana hiadiana amin’ny covid-19
Mitohy ny fanampiana ataon’ireo mpiara-miombon’antoka hiadiana amin’ny valanaretina covid-19. Omaly, nanolotra « respirateur » folo sy fitaovana fampiasa ao amin’ny laboratoara ary EPI ho an’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny Agence Française de développement (AFD).Entina hampitomboana ny isan’ny olona hakana singa sy hanaovana fitiliana izany fitaovana izany. Entina hanatsarana ny fandraisana an-tanana ireo marary ahitana tranga fahasarotana ihany koa anefa.Tsiahivina fa efa nanolotra fitaovana fiarovana amin’ny aretina ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana ny AFD tamin’ny taon-dasa, izay nampamaivay ihany koa ny valanaretina covid-19.Miaro ny mpiasan’ny fahasalamana amin’ny fifindran’ny aretina ireny EPI nozaraina ireny. Ireo mpiasan’ny fahasalamana izay loha laharana amin’izao ady izao.Tatiana AL’article Agence Française de développement: nanolotra fitaovana hiadiana amin’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Jirama: nihena ny saran-jiro sasany
Mizara efatra ny sokajina mpanjifan’ny Jirama mikasika ny herinaratra. Eo ny “social”, ny “économique”, ny “confort” ary ny “superconfort”. Namboarina ny saran’izy ireo ka nisy ny nahena. Toy ny ampaham-bidy voalohany (tranche 1) ho an’ny “économique”, nampidinina ho 340 Ar ny vidin’ny 1Kwh ho an’ny “économique”. Nasiana ampaham-bidy faharoa (2è tranche) ny sokajy “superconfort” (600 Ar/kwh), “”confort” (600 Ar/kwh) ary “économique” (560 Ar/Kwh), manomboka ny fandaniana 130 hatramin’ny 300 kwh. Napetraka koa ny ampaham-bidy fahatelo (3è tranche), mba hampihena ny sady hahaizan’ny mpanjifa mifehy ny fandaniany mba tsy ho be loatra.Nankatoavin’ny Ofisy mandrindra ny herinaratra (ORE) ity saran-jiro vaovao naroson’ny Jirama ity. Natomboka ny faktiora volana mey teo ny andrana ity fepetra vaovao ity. Azo jerena any amin’ny site web-n’ny Jirama rahateo izany.Nampitoviana koa ny vidin-jiro manerana ny faritra eto Madagasikara, izay samy hafa hatramin’izay. Nisy tokoa ny faritra tena nidangana ny vidin-jiro raha latsaka izany any amin’ny toeran-kafa.Njaka A.L’article Jirama: nihena ny saran-jiro sasany a été récupéré chez Newsmada.
Ankoatra ny fandaminana vaovao amin’ny fizarana ny ”Vatsy tsinjo” sy ny ”Tosika fameno”, nisongadina amin’ireo fepetra hiatrehana ny fahamehana ara-pahasalamana mandritra ny 15 andro manaraka ny fiverenan’y asa rehetra hatramin’ny 5 ora hariva. Mbola miato kosa anefa ny fitaterana amin’ny taxibe… Nohalefahana. « Miverina amin’ny fiainana andavanandro ny eto Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, distrtikan’i Moramanga. Miasa hatramin’ny 5 ora hariva ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasam-panjakana rehetra », hoy ny hiloha Rajoelina Andry, omaly raha nitafa ho an’ny vahoaka malagasy. Nanteriny fa misokatra hatramin’ny 5 ora hariva koa ny tsenam-pokontany saingy diovina aorian’izany. Na izany aza anefa, tsy mbola miasa ny taxibe. Miasa tahaka ny teo aloha ny taxi anaty fanarahana fepetra.Mbola miato ny zotra nasionalyTahaka izany koa ny taingin-droa amin’ny moto amin’ny fitondrana ny bokim-pianakaviana. Tafiditra amin’ny sokajy faharoa ary efa tratra ny « Pic » satria midina ny isan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina ny anton’izany.Mbola mikatona kosa ny zotra nasionaly miditra sy mivoaka an’Antananarivo. « Mbola hojerena sy miankina amin’ny fivoaran’ny valanaretina izany », hoy izy. Malalaka ny fivezivezen’ny fiara mitondra entana.Tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alinaMbola voatazona ny tsy fahazoana mivezivezy manomboka amin’ny 9 ora alina hatramin’ny 4 ora maraina. Voarara ny fivoahana ny an’Analamanga ary mbola tsy azo atao koa ny mitondra razana mivoaka ity faritra ity.Etsy andaniny, tsy mbola misokatra ny sekoly ary voatazona ny datim-panadinana rehetra. « Efa mandinika ny fomba hanatanterahana izany ny fanjakana miainga amin’ny fandaharam-pianarana », hoy ihany ny filoha.Mivaha tanteraka ny fepetra ho an’i ToamasinaHo an’ny any Toamasina I sy II kosa, miverina amin’ny fiainana andavanandro ny any an-toerana. « Miala tanteraka amin’ny fihibohana. Na izany aza, ilaina ny fanaraha-maso ny tranga rehetra », hoy ny filoha. Anton’izany efa nandalo ary tapitra ny « Pic » ary nidina ny isan’ireo tratran’ny valanaretina. Naverin’ny filoha nohazavaina koa ny momba ny vatsy tsinjo sy ny tosika fameno ary ireo tokony hisitraka izany.Hampodiana ireo teratany tavela any ivelanyNamaly ny antson’ireo teratany Malagasy tavela any ivelany ny fanjakana ka hampodiana izy ireo. Na izany aza anefa, tsy maintsy mandalo fitiliana any am-piaingana izy ireo. Tahaka izany koa rehefa eto an-toerana ka ho avy ny 15 aogositra sy ny 22 aogositra izy ireo. Iaraha amin’ny Air Madagasikara izany ho an’ny ao Eoropa, hiainga any Paris. Miverina an-tanindrazana ny 19 aogositra kosa ireo any Inde. Omena alalana amin’ny fandehanany manohy fianarana kosa ireo mbola tavela eto ary tokony hiainga ny 21 aogositra izy ireo rehefa milamina ny taratasy.Ho an’ireo mpiasa tapaka asa amin’ny tsy miankina ka nahaloa ny Cnaps, hampidram-bola azy ireo hatramin’ny dimy hetsy ariary ny fanjakana. Tsy hisy ny zanabola ary hanomboka hozaraina ny 24 aogostra izao izany.Synèse R. L’article Mivaha tsikelikely ny fihibohana ho an’Analamanga: mirava amin’ny 5 ora ny mpiasa, mbola miato kosa ny taxibe a été récupéré chez Newsmada.
Raharaha vono olona
Voatazona am-ponja vonjimaika ny lehilahy iray voarohirohy ho namono nahafaty ny vadiny tany Aranta Mahajanga, iray volana lasa izay. Noga­draina ihany koa ireo olona efatra hafa voatondro ho nanafina azy, nialohan’ ny nahatrarana azy, tamin’ny sabotsy lasa teo. L’article Raharaha vono olona est apparu en premier sur AoRaha.